२०७८ मङ्सिर २० सोमबार १०:३८:००
महिलाको जन्मदेखि मृत्युसम्म शोषण र बहिष्करणको चक्र निर्माण गर्ने पितृसत्ताको राजनीति फेर्ने असल राजनीतिले नै हो । महिला हिंसाविरुद्ध असल परिवार, समाज र राज्यव्यवस्थाका लागि सर्वप्रथम महिला संगठित र आन्दोलित हुन जरुरी छ ।
काठमाडौंको माइतीघर मण्डलामा साताभन्दा बढी समयदेखि घरेलु हिंसामा मारिएको भनिएकी नकुन्नी धोबी र भूमाफियाको षड्यन्त्रमा बेपत्ता बनाई मारिएकी निर्मला कुर्मीको न्यायका लागि बाँकेका करिब दर्जन भुइँमहिलाहरू धर्नामा छन् । नेपाली समाजको पिँधमा रहेका दलित एवं अल्पसंख्यक दुई महिलाको अपहरण र हत्याको छानबिन र न्यायका खातिर पीडित परिवार र अधिकारकर्मीहरू वर्षदिनभन्दा बढी समयदेखि आन्दोलनरत छन् । बाँके प्रशासनले आफ्नो माग सम्बोधन नगरेपछि नेपालगन्जदेखि २० दिनको पैदलयात्रा गरेर गत १ असोजमा काठमाडौं आइपुगेका पीडित परिवारका १५ सदस्यले माइतीघरमा धर्ना दिए ।
सुरुमा केन्द्र सरकारले आन्दोलनकर्मीहरूको माग ठाडै लत्याउँदै दमन गर्‍यो । आन्दोलनकर्मीको निरन्तर संघर्ष र नागरिक आन्दोलनको साथ–सहयोगले राज्य आन्दोलनकर्मीको माग सम्बोधन गर्छु भन्ने ठाउँमा पुग्यो । झन्डै दुई साताको आन्दोलनपश्चात् मात्र सरकारका गृहमन्त्रीले आन्दोलनकर्मीको माग सम्बोधन गर्दै नकुन्नी धोबी र निर्मला कुर्मीको हत्यामा संलग्नलाई तत्काल अनुसन्धान गरी कानुनबमोजिम कडा कारबाही गर्ने बताएका थिए । छानबिन कमिटी बन्यो । तर, गृहमन्त्रीले अपराधीलाई अविलम्ब कारबाही गर्छु भनी प्रतिबद्धता जाहेर गरेको महिना बित्दा पनि त्यो कार्यान्वयन भएन, हुने छाँट देखिएन । हत्याजस्तो गम्भीर फौजदारी अभियोगका ६–६ आरोपित पक्राउ परे, तर केही दिनमै केही साधारण तारेख र केही हाजिरी जमानीमा छुटे । महिला बेपत्ता पारिएको छ, मारिएको छ, तर पक्राउ परेका आरोपित व्यक्तिहरू हाजिर जमानीमा छाडिन्छन् । अझ आरोपित बादशाह कुर्मी त पक्राउसमेत गरिन्न । आन्दोलनकारीको मुख्य माग घटना छानबिनका लागि सिआइबी खटाउन सरकार आलटाल गरिरहेको छ ।
आन्दोलनकर्मीको माग सरल छ– घटनाको छानबिन गर ! अपरधीलाई सजाय गर ! छानबिन प्रतिवेदनले दिएको सुझावअनुसार सिआइबीको नेतृत्वमा पुनः छानबिन गर्ने माग फेरि अलपत्र परेको छ । कुरा प्रस्ट छ, यो घटनामा सत्तावाल पार्टीका नेता बादशाह कुर्मी जोडिएका छन् । उनी नेपाली कांग्रेसका स्थानीय नेता र पूर्वसांसद हुन् । धेरैजसो महिलामाथि हुने संगीन हिंसा र अपराधका घटनामा देशका ठूला पार्टी र सरकारका आसेपासेदेखि ठूला नेताकै संग्लनता जोडिन्छ । लहरो तान्दा पहरो तानिन्छ भने जस्तै तीन वर्षअघि बलात्कारपछि हत्या गरिएकी कञ्चनपुरकी निर्मला पन्तको हत्यारा गधाको सिङझैँ बेपत्ता हुनुमा तत्कालीन सत्तावाल पार्टीको ठूलो माछोको ठूलै काण्डको आकलन थियो र छ । यसैले न हत्यामा संलग्न अपराधी समातियो, न त पीडित परिवारले न्याय पाउन सक्यो ।
आजको दिनमा राज्यप्रति आममहिलाले आफूमाथि हुने हिंसामा सजिलै न्याय प्राप्त हुन्छ भन्ने विश्वास छैन । हाल महिलाविरुद्धको १६ दिने अभियान विश्वभर चलिरहेको छ– ‘विश्वलाई सुन्तलीकरण गरौँ, महिलामाथिको हिंसा आजै अन्त्य गरौँ’ (अरेन्ज द वल्र्ड ः इन्ड भायोलेन्स अगेन्स्ट वुमन नाउ, युएन, २०२१) । सुन्तला रङजस्तै महिलाको जीवन चम्किलो र उज्यालो बनाऊँ, सबै प्रकारका हिंसाबाट महिलालाई मुक्त गरौँ भन्ने मर्म बोकेको संयुक्त राष्ट्रसंघको नारा सुन्दा राम्रो सुनिए पनि संसारभरका उत्पीडित महिलाहरूको जीवनमा हिजोदेखि आजको दिनसम्म मात्रात्मक र गुणात्मक हिसाबले विभेद र दमन कति घट्यो, हिंसापीडित महिलाको न्यायमा पहुँच कति बढ्यो भन्ने कुराको गम्भीर समीक्षा जरुरी छ ।
सरकारी एवं गैरसरकारी संस्था र तिनका नाइकेहरूले महिला र उत्पीडित समुदायको न्याय र समानताका लागि वर्षदिनमा एक थान पपुलिस्ट नारा पस्किदिने तर साँच्चिकै न्यायका लागि न नीति बनाउने, न भएका कानुन र कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने, बरु महिला र उत्पीडितहरूको नाउँमा फेरि पनि कथित उपल्ला जातका एलिटहरूले मोटो रकम र सरसुविधा कुम्ल्याउने कार्यकै मात्र निरन्तरता हुने जोखिम कायमै छ । सन् १९९१ देखि प्रत्येक वर्ष नोभेम्बर २५ देखि डिसेम्बर १० सम्म महिलामाथिका तमाम हिंसाबारे छलफल हुन्छन् । तर विडम्बना ! नेपाली समाजमा महिलामाथि हुने हिंसा न्यूनीकरण होइन कि तथ्यांकहरूले त वृद्धिचाहिँ हुँदै गएको देखाउँछ ।
महिलामाथि सार्वजनिक र निजी स्थानमा शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य हिंसा हुनु, महिला भएकै कारण विभेद र दुव्र्यवहार गर्नु, डर धम्की दिनु, महिलालाई सामाजिक, राजनीतिक र आर्थिक उपभोगमा बहिष्करण र नियन्त्रण गर्नु नै महिला हिंसा हो भन्ने परिभाषा संयुक्त राष्ट्रसंघले गरेको छ (महिला हिंसाविरुद्घ घोषणापत्र १९९३, युएन) । घोषणापत्रले ऐतिहासिक रूपमा महिला र पुरुषबीच हुने असमान शक्तिसम्बन्धले समाजमा महिलालाई दोस्रो दर्जाको रूपमा करारनामा गरिनु पनि महिला हिंसा हो भनेर किटान गरेको छ । महिला भएकै कारण मानवअधिकारका सार्वभौम अधिकारबाट वञ्चित गरिनु पनि महिलाको मानवअधिकार हनन हो भनेर परिभाषित गरेको छ ।
महिला हिंसा समाजको त्यो कुरूप अवधारणागत यथार्थ हो, जसले महिलालाई पूर्ण मानवका रूपमा स्विकार्दैन, जहाँ स्वतः महिला पिता, पति र छोराको अधीनस्थ हुन पुग्छे । महिलामाथि विश्वभरि नै फरक स्वरूप र ढाँचामा विभेद र हिंसा हुँदै आएको छ । यसको शृंखला नाइल नदीजत्तिकै लामो र सगरमाथाजत्तिकै अजंगको छ । पछिल्लो समय पुँजीवादी आर्थिक समृद्धिको तामझाम, विज्ञान र प्रविधिको विकाससँगै महिलामाथि थप जटिल प्रकृतिका हिंसाको भार वृद्धि हुँदै गएका छन् । असमान शक्तिसन्तुलनका कारण महिलाहरू आर्थिक स्रोत उपभोगमा, यौनिकतामा नियन्त्रण र कानुनी र नीतिगत संरचनागत अवरोधहरू भोगिरहेका छन् ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार प्रत्येक तीनमध्ये एक महिलाले आफ्नो जीवनमा कुनै न कुनै प्रकारको हिंसा भोग्ने गरेका छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघको तथ्यांकअनुसार प्रत्येक दिन विश्वभर १३७ महिला आफ्नो परिवारका सदस्यबाटै मारिन्छन् । यो तथ्यांकले विश्वभर नै महिलाहरू हिंसाको उच्च जोखिममा छन् भन्ने देखाउँछ ।
महिलामाथिका हिंसा उक्त देशको सामाजिक, आर्थिक अवस्था र सांस्कृतिक प्रचलनअनुसार फरक–फरक हुन सक्छ । पितृसत्तात्मक सामाजिक संरचना, सोहीअनुसारको सामाजिक व्यवस्था, विभेदपूर्ण मूल्यमान्यताले घर, परिवार, समुदाय, समाज र राज्य सबै तहमा महिलामाथिको हिंसा संस्थागत भएको छ । यस्तो सामाजिक संरचनामा पुरुषले जन्मजात विशेषाधिकार पाइरहेको हुन्छ भने महिलाहरूले आफूमाथि भएको हिंसाविरुद्ध बोल्नसमेत ठूलै जोखिम उठाउनुपर्छ ।
दक्षिण एसियाको सन्दर्भमा हिन्दू वर्णवादी पितृसत्तात्मक समाजले महिलाका लागि निर्माण गरेका कठोर धार्मिक, सामाजिक र सांस्कृतिक मूल्यमान्यताहरू महिलाको स्वतन्त्रता र समानताका बीचमा अजंगको पर्खाल बनेर उभिएको छ । राज्य र यससँग जोडिएका संरचनागत अवरोध, असमानपूर्ण कानुनी र नीतिगत व्यवस्थाले गर्दा महिलामाथिको हिंसाको रूप डरलाग्दो छ ।
नेपाली समाज र बढ्दो महिला हिंसा : ०७७ देखि असार ०७८ सम्मको अवधिमा ओरेक नेपालले गरेको एक अध्ययनमा एक हजार सात सय ७२ हिंसाका घटना समाविष्ट छन् । महिला हिंसाका घटनामध्ये सबभन्दा बढी ६३ प्रतिशत घरेलु हिंसा छ । महिलाको सबैभन्दा बढी हिंसा घरभित्र भएको छ । हिंसा गर्नेहरूमध्ये सबैभन्दा बढी आफ्नै श्रीमान् र घरपरिवारका सदस्य छन् । सबैभन्दा बढी ७६ प्रतिशत विवाहित महिलामाथि हिंसा भएको पाइएको छ । महिलामाथि सबैभन्दा धेरै हिंसा श्रीमान्बाट भएको छ । महिलामाथि हिंसा गर्ने ५१ प्रतिशत श्रीमान् रहेको तथ्यांकले देखाएको छ । त्यसैगरी, १९ प्रतिशत महिला परिवारका सदस्यबाट हिंसाग्रस्त छन् । अध्ययनले यस वर्ष सबैभन्दा बढी तराई–आदिवासी–जनजाति महिलामाथि हिंसा भएको देखिन्छ । ओरेकको अध्ययनले हिंसा प्रभावित कुल महिलामध्ये २१ प्रतिशत तराई–आदिवासी–जनजाति, ११ प्रतिशत तराई–दलित, १३ प्रतिशत पहाडे दलित, ६ प्रतिशत ब्राह्मण÷क्षेत्री (तराई) र चार प्रतिशत मुस्लिम महिलामाथि हिंसा भएको तथ्यांक अभिलेख गरेको छ ।
नेपाल प्रहरीमा आर्थिक वर्ष ०७७÷७८ मा आएका उजुरीमध्ये सबैभन्दा धेरै घरेलु हिंसाकै छ । यो वर्ष १४ हजार दुई सय ३२ उजुरी प्रहरीमा आएका छन् । जबर्जस्ती करणीका दुई हजार ५३४ उजुरी दर्ता भएका छन् । तथ्यांकहरूअनुसार हरेक वर्ष महिला हिंसा बढ्दै गइरहेको छ (प्रहरी प्रधान कार्यालय, २०७७) ।
दलित महिला संघ (फेडो)ले ०७६ चैत देखि ०७७ असोजसम्म गरेको एक अध्ययनअनुसार एक हजार तीन सय १८ जनाको बलात्कारजन्य घटनामध्ये दलित महिला र बालिकाको संख्या चार सय ४७ छ । यो समग्रमा ३४.४४ प्रतिशत हुन आउँछ । बलात्कारजन्य हिंसाबाट पीडित दलित महिला र बालिकाले न्यायालयबाट ०.१ प्रतिशत मात्र न्याय प्राप्त गरेका छन् (फेडो, ०७७) । बलात्कारपछि मारिनेमा ८० प्रतिशत दलित बालिका र महिला भएका अध्ययनले देखाएको छ । महिलामाथि हुने हिंसामा दलित र सीमान्तकृत महिला बढी प्रभावित छन् भन्ने पटक–पटकको अध्ययनले पुष्टि गरेको छ ।
पितृसत्ताद्वारा सिर्जित महिलाद्वेषी वैचारिकी ः हिन्दू समाज महिलालाई रामायणकी सीता, महाभारतकी द्रौपदी, स्वस्थानी कथाकी गोमा बन्न प्रेरित गर्दै हुर्काउँछ । रामायणकी सीता पात्र पति रामको सहनशील र आज्ञाकारी श्रीमतीको भूमिकाका कारण पुजिन्छिन् । जीवनभर पति रामको अनुगामी, प्रतिच्छाया बनेकी सीताले रावणको अपहरणमा परी फर्किएपछि पतिव्रता साबित गर्न अग्निपरीक्षा दिँदै अग्नि समाधिमा होमिनु पर्‍यो । द्रौपदी महाभारतकी यस्ती पात्र हुन्, जो सासू कुन्तीका छोराहरूलाई बराबर भाग लाउने संकल्पका कारण पाँच भाइ पाण्डवकी साझा श्रीमती बन्न बाध्य भइन् । आफ्ना श्रीमान्हरूले शत्रु पक्षसँग खेलेको जुवाको खालमा वस्तुजस्तै दाउमा पारिइन्, हारिइन् । स्वस्थानी व्रतकथाले बलात्कार, बहुविवाह, अनमेल विवाह र बालविवाहलाई पूूर्ण रूपमा धार्मिक मान्यता दिएको छ । कथामा जालन्धरकी पत्नीलाई विष्णुले जालझेल गरी बलात्कार गरेकोलाई सहज प्रस्तुुत गरिएको छ । यसलाई धर्मको रूपमा स्थापित गर्ने कार्य गरेको छ । मनुस्मृतिले त महिलालाई तिरस्कार गर्ने, वस्तुकरण गर्नेमा हद नै राखेको छैन । मनुस्मृतिकै निर्देशनअनुसार नेपाली समाजमा वि. सं. १९७७ अघिसम्म लोग्नेको चितामा दर्जनौँ श्रीमतीहरू जिउँदै जलाइन्थे ।
हिन्दू सामन्ती पितृसत्तावादले हिन्दू आदर्श र संस्कृतिको जलप लगाएर महिलालाई निम्छरो स्थानमा राख्छ भने विकृत पुँजीवादी अवधारणाले चाहिँ महिलाको स्वतन्त्रता र मानवअधिकारको विषयलाई बडेमानको जार्गनरूपी भाष्यको लेप लगाउँदै पितृसत्ताकै सुधारमुखी अवतारलाई मलजल गर्छ । एकातिर, हिन्दू नेपाली महिलालाई हरेक महिना आफ्नो शरीरबाट हुने नियमित प्राकृतिक रक्तश्रावलाई अशुद्ध र अछुत मान्ने संस्कृति खडा गरिन्छ, अर्कोतिर महिलालाई मल्टिनेसनल कम्पनीहरूको मालबजार बनाएर करोडौँ कमाइदिने साधन बनाउने प्रपञ्च गरिन्छ । महिलामाथि हिंसाको कहर थोपर्न सामन्तवाद र पुँजीवादी दुवै पक्ष उक्तिकै सशक्त देखिन्छन् ।
दक्षिण एसियाको भारत र नेपालजस्ता हिन्दू वर्णवादी समाजमा धार्मिक र संस्कृतिजन्य प्रथा प्रचलन छाउपडी, दाइजो र छुवाछुतजन्य दुव्र्यवहार र हिंसा कायमै छ । घरेलु हिंसा र बलात्कारजन्य हिंसा अमेरिकाजस्तो विकसित भनिएको मुलुकमा पनि अत्यधिक छ । संसारकै शक्तिशाली लोकतान्त्रिक मुलुक भनी प्रचारित अमेरिकामा दैनिक तीन महिला आफ्नो प्रेमी र श्रीमान्बाट मारिन्छन् । प्रत्येक वर्ष १० करोड अमेरिकी महिला घरेलु हिंसाबाट प्रताडित भएको तथ्यांक सार्वजनिक हुन्छ । प्रत्येक तीनमध्ये एक अमेरिकी महिला गरिब छन् । घरेलु महिला हिंसाको दर झन् डरलाग्दो छ । चारमध्ये एक महिला घरेलु हिंसाको सिकार भएको देखिन्छ । प्रत्येक पाँच अमेरिकी महिलामध्ये एक आफ्नो प्रेमी वा नजिकको पुरुष साथीबाट बलात्कृत हुन्छन् (एनसिएडिभी, २०२१) ।
महिला दिनहँु किन हिंसाबाट प्रताडित छन् वा हिंसापूर्ण जीवन जिउन बाध्य छन् ? महिलाले न्याय पाउने वातावरण किन दिनहुँ चुनौतीपूर्ण बन्दै गइरहेको छ ? यसको कारण र समाधान खोज्नु अत्यावश्यक भइसकेको छ । महिलामाथिको हिंसालाई अति नै सामान्यीकरण गर्नु, घटनालाई राजनीतीकरण गरेर पीडकलाई संरक्षण दिनु, सहयोगी संयन्त्रहरू पीडितमैत्री नहुनु, पीडित घटनाविरुद्ध उजुरी दिन जाँदा हतोत्साहित हुनुपर्ने वातावरण अद्यापि छ ।
मुलुकमा संविधानबाहेक राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा प्रतिबद्घता गरिएका दुई दर्जनजति कानुनी संरचनाहरू उपलब्ध छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघ र दातृ निकायहरूको दबाबमा जारी गरिने राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्घताहरूको कार्यान्वयनमा चुनौतीको पहाड उभिएको देखिन्छ । पर्याप्त अध्ययन, आवश्यक स्रोत साधन र तयारीविना गरिएका ८० प्रतिशतभन्दा बढी नीतिगत व्यवस्थाहरू असफल हुने गरेको देखिन्छ । संविधानको धारा ३८ को उपधारा ३ ‘महिलाविरुद्ध हुने धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परम्परा, प्रचलन वा अन्य कुनै किसिमको हिंसाजन्य कार्य वा शोषण गरिनेछैन । त्यस्तो कार्य कानुनबमोजिम दण्डनीय हुनेछ । पीडितलाई कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ’ भन्छ । तर, उल्लेखित अधिकारको कार्यान्वयनमै समस्या छ । यसले नेपाली समाजमा चरम जातीय र छुवाछुत हिंसाबाट पीडित दलित महिलाको न्यायमा पहुँचलाई सम्बोधन गर्न नसकेको अध्ययनहरूले देखाउँछन् ।
महिलामाथि जसरी हिंसा बढेको छ, सोही अनुपातमा राज्यले हिंसा अन्त्यका लागि आवश्यक नीति कार्यक्रम बनाएको छैन । विडम्बना ! राज्यसँग एउटा गैरसरकारी संस्थासँग भएको जति पनि महिला हिंसासम्बन्धी आधिकारिक र चुस्त तथ्यांक छैन । महिला हिंसाविरुद्ध राज्यको यस्तो गैरजिम्मेवार सोच र कार्यक्रमको अभावले गर्दा नै उनीहरूमाथिको हिंसा न्यूनीकरण हुन सकिरहेको छैन ।
निष्कर्ष : नेपालको शासकीय चरित्र वर्णवादी र पितृसत्तात्मक छ । सोही वैचारिकीमा बनेको अर्थराजनीतिक व्यवस्था जब्बर रूपमा स्थापित छ । महिलामाथि हुने जस्तोसुकै हिंसालाई यो वैचारिकीले आमघटनाका रूपमा नै गणना गर्छ । महिलामाथिको हिंसालाई स्वाभाविक ठान्छ । जबसम्म समाजमा व्यक्तिलाई हुर्काइको तहबाट नै महिलालाई शासित र पुरुषलाई शासकका रूपमा स्थापित गरिन्छ, तबसम्म महिला हिंसा उन्मूलन हुन सक्दैन । पितृसत्ता अवधारणा मात्रै हैन, न त घटनाविशेष मुद्दा हो । यो त राजनीतिक विषय हो ।
मुलुकको राजनीति कस्तो छ ? राज्यले महिलाकेन्द्रित सवालमा कस्तो विचार र नीति लिएको छ भन्नेले महिलाको अधिकार सुनिश्चित हुने मापदण्ड तय हुन्छ । भर्खर बहिर्गमित गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले महिला हिंसा नेपालमा मात्रै हैन, विकसित मुलुकमा पनि हुन्छ भनेर गम्भीर यौनजन्य हिंसालाई सामान्यीकृत गरेको वर्षदिन नाघेको छैन । जब देशको प्रधानमन्त्री र पार्टीको अध्यक्षले महिला नेतालाई अधिकार माग्दा ‘ट्याउँट्याउँ नगर’ भन्छ– स्वाभाविकै छ, त्यस्तो पार्टी र राज्यमा महिलामाथि अत्याचार भइरहन्छ । राजनीतिक पार्टी र सरकारमा भएका महिलाहरू स्वतन्त्र छैनन् । पार्टीभित्र नेता बन्न, सांसद बन्न भाले नेताको शरण पर्नुपर्ने, हारगुहार गर्नुपर्ने भएपछि ती महिला नेता र ती रहेको पार्टीले आममहिलाको मुक्ति गर्छ भनेर कसरी पत्याउनु !
महिला हिंसा खास लिंग र समुदायको मात्रै मुद्दा हैन, यो त विश्वका आधा जनसंख्यालाई दुव्र्यवहार, अपमान र बहिष्करण गर्ने अवधारणा हो । यसलाई संवेदनशील सवालको रूपमा प्रत्येक जिम्मेवार व्यक्तिदेखि राज्यसम्मले गहन रूपमा आत्मसात् गर्नुपर्छ । महिलामाथि हिंसा भएपछि घटनाप्रति प्रतिक्रियात्मक हुनुभन्दा घटना हुनै नदिने वातावरण सिर्जना गर्न आवश्यक छ । हिंसापीडित महिलालाई पुनस्र्थापित गर्ने नाममा समाजबाट पर लैजाने होइन कि पीडक पुरुषलाई समाजबाट बहिष्करण गरी महिलाको मनोबललाई उच्च पार्ने मनोवैज्ञानिकी विकास नगरी हुन्न ।
महिलामाथिका हरेक गम्भीर हिंसाका घटनामा राजनीतीकरणले पीडितको न्याय ओझेलमा पर्न जान्छ । सिंगो राज्यसत्ता पक्ष र विपक्षमा विभाजित हुने विडम्बनालाई अन्त्य गर्न राजनीतिक दलहरूभित्रै महिला हिंसासम्बन्धी संवेदनशीलता जगाउन जरुरी छ । सामाजिक सञ्जालमार्फत भइरहेका उच्छृंखल गतिविधि र खुुला रूपमा हेर्न नसकिने यौनजन्य सामग्रीहरूमा नियन्त्रण गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्छ । महिला स्वयंले पनि धर्म, संस्कार, संस्कृतिले गरेका विभेदहरूलाई बुझी त्यसलाई बहिष्कार गर्ने ताकतको विकास गर्न जरुरी छ । महिलाका जैविकजन्य कुरालाई आधार बनाई जन्मदेखि मृत्युसम्म शोषण र बहिष्करणको चक्र निर्माण गर्ने पितृसत्ताको राजनीतिलाई फेर्ने फेरि पनि असल राजनीतिले नै हो । तसर्थ, महिला हिंसाविरुद्ध असल परिवार, समाज र राज्यव्यवस्थाका लागि सर्वप्रथम महिला नै संगठित र आन्दोलित हुन जरुरी छ ।
#धनकुमारी सुनार # महिला हिंसा # राज्यको द्वेषी चरित्र
शिक्षकद्वारा छात्राहरूमाथि दुर्व्यवहार, विद्यालयमै गुपचुप राख्ने प्रयास
नेपालको सन्दर्भमा महिला हिंसा
न्याय खोज्दै नेपालगन्जदेखि पैदल काठमाडौं (फोटोफिचर)
निषेधाज्ञामा बढ्यो महिला हिंसा
‘लिभिङ टुगेदर’मा पनि महिला हिंसा
पुरुषले मौनता तोडे महिला हिंसा कम हुन्छ